Ihe ọhụrụ 3 nke gam akporo 12 nke ga - eme ka nhazi na ahuhu di nma | Gam akporosis
Bọchị ndị a kemgbe preview wepụtara maka gam akporo 12 mmepe, Anyị amatala akwụkwọ ọhụụ atọ ga-amasị ọtụtụ ndị; ọ bụ ezie na ekwesịrị ịsị na akụkụ dị mma nke ha abanyelarịrị na ọkwa ndị ọzọ ahaziri dịka Samsung.
Un Android 12 nke anyị na-aza ajụjụ banyere ụfọdụ n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụụ ụbọchị ndị a gara aga, kedu ka ọnọdụ ọhụrụ a si bụrụ otu aka, na nke ahụ na ozi atọ anyị nwere taa, ihe a kachasị ọhụrụ dị ka ọ dị mma. Gaa maka ya.
1 Editọ nseta ihuenyo na mma na gam akporo 12
2 Ọhụrụ mkpọchi ihuenyo na ificationsma Ọkwa
3 Na njedebe na gam akporo: mmegharị ahụ maka ọkwa na ihuenyo ọ bụla
Editọ nseta ihuenyo na mma na gam akporo 12
Na Samsung Otu UI anyị nwere ngwaọrụ dị ike ijide ihuenyo dị ka ikike ịkwaga ihe ọkụkụ ka ọ weghara ihuenyo ma ọ bụ ọbụlagodi ikike ịhọrọ akụkụ niile maka ịkpụ ọsọ ọsọ.
Na ọhụrụ version, Android 12 na-anakọta mgbakwunye abụọ dị mkpa dị ka bọtịnụ ihe ọkụkụ na ohere ịgbakwunye akwụkwọ mmado na ederede. Ọ na-ewebata a nchicha ngwá ọrụ, mgbe azụ ma ọ bụ n'ihu bọtịnụ na omume rụrụ, kwaga n'elu nke mere na interface na-ewe ọzọ agbam ume na notoriety.
Ọ bụghị na ọ bụ nnukwu ihe ọhụụ, mana ka ọ dị mma ijide n'aka na ndị na-eji nsụgharị dị ọcha nke gam akporo, na ha na-atụ uche a dị elu karị nseta ihuenyo, ha ga-amarakwa otú uru ya na ha ezu.
Ọhụrụ mkpọchi ihuenyo na ificationsma Ọkwa
Ewezuga ndị a ihe dị ọhụrụ na gam akporo 12 dị ka ọnọdụ egwuregwu na ndị ọzọ, Anyị nwere ike ịmalite ịgụta ọhụụ ọhụrụ maka Mgbe niile na Ngosipụta, mkpọchi mkpọchi, na ọkwa. Ya mere, anyị nwere ike ịsị na Google na-ezube ịnye ọhụụ maka atụmatụ nke gam akporo.
Na A hụwo mkpọchi mkpọchi na Android 12 Mmepụta hụchalụ elekere dijitalụ ke iso, adianade mme hour oro ẹbede minit, ye akamba abisi kiet, emi ekperede ndidi akamba. Ngwaọrụ "Na ileba anya" nke nwere ozi gbasara ihu igwe na ihe ndị ọzọ ka akwagara n'aka ekpe.
Na ngosipụta ngosipụta Google na - anwale ihe n’enweghi nsogbu nke ga-aga aka na ọnọdụ ụbọchị / abalị. Dị ka agba nke akwụkwọ ahụaja ga-adabere na agba nke isiokwu anyị nwere ike iche na anyị nwere ike itinye na Android 12 dị ka akụkụ nke "isiokwu" ya.
Kedu ee nke ahụ pụta ìhè na akpa ilekiri bụ otú "oké" nke bụ ogwe ihie ma e jiri ya tụnyere nke anyị nwere ugbu a. Dịka obere nkọwa abụọ, anyị ga-arụ ọrụ na ọkwa ngosi ọhụụ yana ihu ngosi ihu abụọ.
Na njedebe na gam akporo: mmegharị ahụ maka ọkwa na ihuenyo ọ bụla
Onye ukwu ọdịiche a na-ahụ anya nke ihe ọhụrụ a na mmegharị ahụ dị ala nke na-enye anyị ohere site na desktọọpụ ma ọ bụ ụlọ iji gbasaa ogwe ngosi ahụ ka anyị wee nwee ike ịga na mkpirisi ụzọ ọzọ na ngosipụta ọzọ, bụ na gam akporo 12 anyị ga-enwe ike mee ya na ihuenyo ọ bụla.
Nke ahụ bụ, anyị agaghị ala n'ụlọ ime ya, mana ịnọ na ngwa ma ọ bụ na ntọala ngosi ngosi ga-gbasaa iji nweta nkata ozi, na ndị ọzọ.
Achọtara m mmegharị ọzọ - swipe maka ọkwa. Mara ka Pixel Launcher na-ahapụ gị ịdanya ala na ihuenyo ụlọ iji kwatuo ọkwa ngosi? Ee, nke a na - eme - mana na ngwa ọ bụla. pic.twitter.com/VpmRESJkkM
- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 19, 2021
Ozi nnabata nke m ma Nwere ike ịhụ na tweet anyị jikọtara yabụ ị nwere ike ịhụ kedu ka o si arụ ọrụ. Ọ ga-adị mkpa ịhụ ụdị ngwa ọrụ a ga - eji kwụsị ọrụ ha.
Ihe ọhụrụ 3 nke gam akporo 12 nke gbakwunye atụmatụ ndị ọzọ ka ihe na-abịa na mmelite a nke nwere ike ịhụ ìhè site n'oge ọkọchị dịka ọ na-emekarị kwa afọ; Ee ee, anyị nwere ụfọdụ nke atụmatụ ọhụrụ ndị ahụ n'ụdị omenala ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » 3 akwụkwọ ọhụrụ nke gam akporo 12 nke ụbọchị ikpeazụ ị gaghị echefu